अनुभवले खारिएका गाउँका सोडेनी
हेकुली ८ हेकुलीकी गुनी चौधरीले सुत्केरी स्याहार्न थालेको २० वर्ष नाघिसक्यो । जब गाउँमा कोही गर्भवती हुन्छ, उनलाई अग्रिम ‘बुक’ गरिन्छ । भ्याइनभ्याइ हुन्छ । सुत्केरी व्यथा लागेदेखि न्वारानसम्म सुत्केरी स्याहार्छिन् । सुत्केरी कसरी गराउने ? आमा र शिशुलाई कसरी…
सफल तरकारी व्यवसायी बसन्ता
दाङ । बिहानैदेखि बेलुकासम्म टमाटर बारीमा समय विताउनु वसन्ता अर्यालको दिनचर्या बनेको छ । हरेक वर्षको असोजदेखि बैसाखसम्म वर्षको आठ महिना टमाटर बारीमा बित्छ वसन्ताको समय ।केही समयअघिसम्म आर्थिक समस्या झेल्दै आएकी थिइन् बसन्ता । दुई चार रुपैयाँको आवश्यकता पूरा…
झुक्याएर सम्बन्ध बिच्छेद
घोराही । ‘सम्बन्ध बिच्छेद भईसकेपछि पनि हामी पहिलेकै जस्तै श्रीमान् श्रीमती भएर एउटै घरमा बस्न सक्छौ । यो सम्बन्ध बिच्छेद त घरपरिवार र समाजलाई देखाउनको लागि मात्र हो ।’ यस्तै वनावटी कुरा गर्दै घोराही नगरपालिका ११ लोहासुरका राजु डाँगीले आफनी…
महिला उद्यमीलाई बिना धितो कर्जा
प्यूठान । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा आवेदन दिएका जिल्लाका २१ जना महिला उद्यमीहरुले सहुलियत व्याजदरमा कर्जा पाएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विभाग अन्तर्गत उद्यमीहरुले उद्योग/व्यवसायको प्रकृति अनुसार कर्जा पाएका हुन् । १ देखि डेढ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गरिएको राष्ट्रिय…
चरा संरक्षणमा जुटे महिला
जनक नेपाली दाङ रामपुरका महिला सामुहिक रुपमा चरा संरक्षणमा जुटेका छन् । पर्यावरण जोगाउने र त्यसबाट आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिदै गाउँको विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले चरा संरक्षणमा जुटेको उनीहरुको भनाई छ । रामपुर गाविस वडा नं. ६ र ७ मा…
सीमामा असुरक्षित महिलाहरु
रीता लामा दाङ । भारतसँग सीमाना जोडिएका नेपालका अधिकाशं क्षेत्र सुरक्षाका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छन । छिमेकीमाथि हैकम जमाउने प्रवृत्ति, सिमा क्षेत्र कब्जा गर्ने नीतिका कारण सिमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरु थप मारमा परेका छन । त्यसमा पनि गरीबीको रेखामुनि बाँचिरहेका नेपालीहरु…
महिला हिंसाविरुद्ध दाङमा आकस्मिक कार्यसमूह
समरेखा डेस्क महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध तत्काल पहल गर्न जिल्लामा महिला हिंसा विरुद्ध आकस्मिक कार्य समूह गठन गरिएको छ । जिल्लामा क्रियाशील महिला अधिकारकर्मीहरुले महिला हिंसा विरुद्ध आकस्मिक कार्य समूह दाङको निर्माण गरेका हुन् । महिलामाथि हुने/भएका हिंसा विरुद्ध एकीकृत…
बजार खोज्दै प्यूठानका उद्यमी दाङमा
समरेखा डेस्क कहिँकतै महोत्सव भयो उनीहरु पुगिहाल्छन् । हस्तकलाका विभिन्न सामानहरुसहित प्यूठानको प्रतिनिधित्व सहित उनीहरु त्यहाँ भेटिन्छन् । आफूले तयार गरेका सल, स्वीटर, गुडिया, कोठा सजावटका विभिन्न सामानहरुले उनीहरुको स्टल सुसज्जित हुन्छ । महोत्सव सकिएको हुँदैन उनीहरुका सामान…
अस्पतालमा लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र
समरेखा डेस्क लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि एकीकृत र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थाकालागि अस्पतालमा आधारित लैंगिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र दाङको घोराहीस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा स्थापना भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह सचिव बद्री…
रोजगार कम्पनीको झुट्टा बाचा : आप्रवासी श्रमिक शोषणको कारण
समरेखा डेस्क । बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले गर्ने झूट्टा बाचा आप्रवासी कामदारको शोषण र जबरजस्ती श्रमको प्रमुख कारण रहेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ । एमनेष्टी इण्टरनेशनलले २०११ मा गरको एक अनुसन्धानले सो तथ्य औंल्याएको हो । एमनेष्टी इन्टरनेशनलको सो अनुसन्धानले…